Blockchain - Ny hoavin'ny teknolojia ara-bola | Martech Zone
Talata, Aprily 2, 2019 Talata, Aprily 2, 2019 Kenneth Evans
Ireo teny cryptocurrency sy blockchain dia hita hatraiza hatraiza. Ny fijerin'ny besinimaro toy izany dia azo hazavaina amin'ny lafin-javatra roa: ny halafon'ny vola crypto Bitcoin ary ny fahasarotan'ny fahazoana ny votoatin'ny teknolojia. Ny tantaran'ny fipoiran'ny vola nomerika voalohany sy ny teknolojia P2P eo ambaniny dia hanampy antsika hahatakatra ireo "ala mikitroka" ireo.
Misy famaritana roa an'ny Blockchain:
• rojo mitohy mitahiry rojo misy sakana misy fampahalalana.
• Databola voazara indray;
Samy marina amin'ny maha izy azy izy ireo saingy tsy manome valiny amin'ny fanontaniana hoe inona izany. Raha te hahalala bebe kokoa ny teknolojia dia ilaina ny mahatadidy izay maritrano ny tambajotran'ny solosaina misy ary iza amin'izy ireo no manjaka amin'ny tsenan'ny rafitra IT ankehitriny.
Amin'ny ankapobeny dia misy karazana maritrano roa:
Tambajotra mpizara mpanjifa;
Ny tambajotra amin'ny fomba voalohany dia midika fifehezana ifotony ny zava-drehetra: fampiharana, data, fidirana. Ny lojika sy ny fampahalalana rehetra momba ny rafitra dia miafina ao anaty mpizara, izay mampihena ny fepetra takiana amin'ny fampitaovana mpanjifa ary miantoka ny hafainganam-pandeha avo. Ity fomba ity dia nahasarika ny sain'ny olona amin'izao androntsika izao.
Ny tambajotran-tserasera na mpiara-miasa na vondron'olona itsinjaram-pahefana dia tsy manana fitaovana maoderina, ary ny mpandray anjara rehetra dia manana zo mitovy. Amin'ity maodely ity, ny mpampiasa tsirairay dia tsy mpanjifa fotsiny fa lasa mpamatsy serivisy koa.
Ny tsimbadika voalohany an'ny tambajotram-pifandraisan'ny namana dia ny rafitra fandefasan-kafatra USENET novolavolaina tamin'ny 1979. Ny roapolo taona manaraka dia voamariky ny famoronana P2P (Peer-to-Peer) - fampiharana amin'ny sehatra samihafa tanteraka. Ny iray amin'ireo ohatra malaza indrindra dia ny serivisy Napster, ny tambajotram-fizarana rakitra mitovy amin'ny mpitia na taloha, na BOINC, ny sehatry ny rindrambaiko ho an'ny computing zaraina, ary ny protokol BitTorrent, izay fototry ny mpanjifa torrent maoderina.
Ireo rafitra mifototra amin'ireo tambajotram-bahoaka itsinjaram-pahefana dia mitohy misy, saingy miharihary fa very ny mpanjifa mpanjifa amin'ny fihanaky sy fanarahana ny filan'ny mpanjifa.
Ny ankamaroan'ny rindranasa sy rafitra amin'ny fandidiana ara-dalàna dia mitaky fahaizana miasa amin'ny angona data. Betsaka ny fomba fandaminana ny asa toy izany ary ny iray amin'izy ireo dia mampiasa ny fomba fanaon'ny namana. Ny angon-drakitra voazara, na mifanila, dia miavaka amin'ny hoe ny fampahalalana amin'ny ampahany na feno dia voatahiry amin'ny fitaovan'ny tambajotra tsirairay.
Ny iray amin'ireo tombony azo amin'ny rafitra toy izany dia ny fisian'ny data: tsy misy teboka tsy fahombiazana tokana, toy ny tranga misy amin'ny base data amin'ny mpizara tokana. Ity vahaolana ity dia misy fetrany ihany koa amin'ny hafainganan'ny fanavaozana ny angon-drakitra sy fizarana izany amin'ireo mpikambana ao amin'ny tambajotra. Ny rafitra toy izany dia tsy hahatanty ny vesatry ny mpampiasa an-tapitrisany izay mamoaka vaovao tsy tapaka.
Ny teknolojia blockchain dia mihevitra ny fampiasana tahiry block nozaraina, izay lisitra misy ifandraisany (ny sakana manaraka dia misy ny famantarana ny teo aloha). Ny mpikambana tsirairay ao amin'ny tamba-jotra dia mitazona ny kopian'ny asa rehetra natao hatramin'ny fotoana rehetra. Tsy ho tanteraka izany raha tsy nisy fanavaozana natao mba hiantohana ny fiarovana sy ny fisian'ny tambajotra. Izany dia mitondra antsika any amin'ny "andry" farany an'ny blockchain - cryptography. Tokony hifandray amin'ny a orinasa fampandrosoana fampiharana finday manakarama ireo mpamorona blockchain mba hampiditra an'io teknolojia io amin'ny orinasanao.
Aorian'ny fandinihana ireo singa lehibe sy ny tantaran'ny famoronana teknolojia dia tonga ny fotoana hialana amin'ny farany ilay angano mifandraika amin'ny teny hoe "blockchain". Diniho ohatra tsotra iray amin'ny fifanakalozana vola dizitaly, ny fitsipiky ny fiasan'ny teknolojia blockchain tsy misy solosaina.
Aoka hatao hoe manana vondron'olona 10 isika izay te-afaka manao asa fifanakalozana vola ivelan'ny rafitra banky. Diniho misimisy ireo hetsika nataon'ny mpandray anjara tamin'ny rafitra, izay hisolo tena ny taratasy tsy tapaka ny blockchain:
Ny mpandray anjara tsirairay dia manana boaty iray izay hanamparany takelaka misy fampahalalana momba ny fifanakalozana vita rehetra ao amin'ny rafitra.
Ny fotoana ifampiraharahana
Ny mpandray anjara tsirairay dia mipetraka miaraka amina ravin-taratasy sy penina ary vonona hanoratra ireo fifanakalozana rehetra hatao.
Amin'ny fotoana iray, ny mpandray anjara laharana 2 dia te handefa 100 dolara ho an'ny mpandray anjara laharana 9.
Raha te-hamita ny fifanakalozana, ny Mpandray anjara No. 2 dia nanambara tamin'ny olon-drehetra: "Te-hamindra 100 dolara ho an'ny No. 9 aho, koa manaova an-tsoratra an'io eo amin'ny taratasyo.
Aorian'izany dia manamarina ny tsirairay raha manana mizana sahaza ny mpandray anjara 2 hamitana ny fifanakalozana. Raha izany dia samy manao fanamarihana momba ny fifanakalozana eo amin'ny lambam-bolany ny tsirairay.
Aorian'izany dia heverina ho feno ny fifanakalozana.
Fanatanterahana ny fifampiraharahana
Rehefa mandeha ny fotoana dia mila manao hetsika fifanakalozana ihany koa ireo mpandray anjara hafa. Ireo mpandray anjara dia manohy manambara sy mandrakitra ny tsirairay amin'ireo fifanakalozana vita. Ao amin'ny ohatra asehontsika, ny fifanakalozana 10 dia azo soratana amin'ny takelaka iray, aorian'izay dia ilaina ny mametraka ilay takelaka feno ao anaty boaty iray ary maka iray vaovao.
Manampy takelaka amin'ny boaty
Ny zava-misy dia apetraka ao anaty boaty ny takelaka iray dia midika fa ny mpandray anjara rehetra dia manaiky ny maha-marina ny asa rehetra tanterahina sy ny tsy fahafahan'ny fanovana ilay takelaka amin'ny ho avy. Io no miantoka ny fahamendrehan'ny fifanakalozana rehetra misy eo amin'ireo mpandray anjara izay tsy mifampatoky.
Ny dingana farany dia tranga ankapobeny hamahana ny olan'ny jeneraly Byzantine. Amin'ny toe-piainan'ny mpandray anjara lavitra, ny sasany amin'izy ireo dia mety hiditra an-tsehatra, ilaina ny mitady tetika mandresy ho an'ny rehetra. Ny dingan'ny famahana ity olana ity dia azo jerena amin'ny alàlan'ny maodelin'ny maodely mifaninana.
Eo amin'ny sehatry ny fitaovana ara-bola, Bitcoin, izay cryptocurrency voalohany, azo antoka fa nampiseho ny fomba filalaovana ireo lalàna vaovao tsy misy mpanelanelana sy fanaraha-maso avy any ambony. Na izany aza, angamba ny valiny manan-danja kokoa noho ny fisian'ny Bitcoin dia ny famoronana teknolojia blockchain. Mifandraisa amin'ny orinasa fampandrosoana blockchain mba hanakaramana ireo mpamorona sakana hanakambana ity haitao ity amin'ny orinasao.
Tags: blockchainfampandrosoana blockchainblockchain teknolojiaTeknolojia ara-bola